AMakhosi atusa ukubambisana noMnyango kwezemidlalo – Ubukhosi
Home/ UBukhosi BoHlanga/AMakhosi atusa ukubambisana noMnyango kwezemidlalo
UMphathiswa uNkk uBongi MaSithole-Moloi naMakhosi ezinkundleni zemidlalo eMnambithi
LUNESASASA uhlelo loMnyango Wezobuciko Namasiko Nezemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal njengoba ubambisene naMakhosi ukubuyisela uHulumeni ezindaweni zasemakhaya ukuyovundulula amakhono ngezemidlalo.
Lokhu kwenzeke ngempelasonto yomhla zingama-24 namhla-25 kuNdasa eMnambithi ezinkundleni zemidlalo, uMnyango naMakhosi behlanganise izifunda okuhlala kuzo aMakhosi athile kudlalwa le midlalo ngohlelo lokuthuthukisa ezemidlalo ezindaweni zasemakhaya. Lolu hlelo lwale midlalo luthakaselwe kakhulu abantu abasha njengoba bebeqhudelana ngemidlalo enhlobonhlobo bemele izifunda zabo kanye nemikhandlu yaMakhosi abo. Le midlalo yaqalwa kukhona amakhosi amabili njengoba manje isibalo sikhuphukele kwamahlanu.
Kuqale kuyiNkosi yesizwe sakwaMnqobokazi eMkhanyakude kanye neNkosi yakwaMaphumulo eThekwini ngonyaka odlule ngokuhlonzwa Indlu Yobuholi BoMdabu KwaZulu-Natal. Kulo nyaka isibalo sengezekile njengoba uMkhandlu weNkosi yakwaXolo ngaphansi ko-Ugu, kube uMkhandlu weNkosi iVulindlela eMzinyathi bese kuba uMkhandlu wesizwe Amaswazi oThukela bebe yingxenye yale midlalo. Izindawo zasemakhaya zisabhekene nengwadla yokushoda kwezingqalazizinda zokuthuthukiiswa kwamakhono, okungaba izinkundla ezisesimweni, nokunye. Ezemidlalo kuyiqiniso ukuthi zibumba isizwe ziqoqe abantu beyeke ukuba wuvanzi, kudaleke ukuzwana nobungani kuliwe nobugebengu kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Isikhalo esikhulu semiphakathi ukuthi uHulumeni ubebonakala ehambisa usizo kubantu abavele bethuthukisiwe emadolobheni amakhulu ekhohlwe umuntu osemakhaya ogcina ephendluka umhambuma engazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani.
INkosi yakwaSithole uNgqayizivele oThukela ilujabulele lolu hlelo lokuthuthukiswa kwamakhono abantu abahlala ezindaweni zasemakhaya. “Kuyintokozo enkulu kithi uma sibona uHulumeni ebuyela ezindaweni zasemakhaya ezovundulula amakhono. Amakhono akhona ezindaweni zethu esiziphethe inkinga izinsiza asinazo, azikho izinkundla ezisesimweni. Kanti ezemidlalo ziyasiza kakhulu ukuhlanganisa izizwe zazane kuphele nezimpi lezi zezigodi.”
INkosi yesizwe sakwaMaphumulo eMdumezulu uNkosinathi Maphumulo ithe kuningi okusamele kubanjiswane ngakho noHulumeni engazibambeli yedwa akaqhubeke nokusebenzisana naMakhosi ngoba yiwo aphethe izizwe.
“Likhulu kakhulu iqhaza elingabanjwa aMakhosi ekuthuthukiseni ezemidlalo ezizweni zawo. Kwesinye isikhathi akudingi ukuthi kube uHulumeni kuphela ozozibambela yedwa kodwa nathi njengabaholi boMdabu sinxenxe osomabhizinisi abahweba ezizweni zaMakhosi ngokuthi befake isandla nabo kuhlomule umphakathi.”
UMphathiswa woMnyango Wezemidlalo Nokungcebeleka uNkk uBongi uMaMoloi Sithole uthe ufisa ukubona kusizakala umphakathi ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ngoba vele lezi zasemadolobheni zinazo izinsiza.
“UMnyango Wezemidlalo Nokungcebeleka uzibophezela kakhulu ekwenzeni amathuba okuthi abantu bakithi bazibandakanye nezemidlalo, ezokungcebeleka nokuzivocavoca noma yikuphi lapho bekhona kulesifundazwe saKwaZulu-Natal. UMnyango wasungula iRural Sport Development Programme njengengxenye yohlelo lukazwelonke, ukwakhela amathuba umphakathi owakhele izindawo zasemakhaya ukuthi ubeyingxenye yalemidlalo futhi unikeze ithuba abadlali abanekhono ukuthi bagqame. Yingalesi sizathu-ke esenza kubaluleke ukuba yingxenye yale midlalo. Lokhu sikwenza ngokubambisana nobuholi boMdabu esifundazweni. Ngithanda ukubonga bonke ubuholi boMdabu obukwazi ukuthi buhlele kanye nathi lemidlalo yalo nyaka wezi- 2018 futhi angingabazi ukuthi le midlalo izodlondlobala minyaka yonke.”
Imidlalo obekuqhudelwana kuyo bekuyibhola lezinyawo labafana namantombazane, yibhola lombhoxo, ezokugijima, elomnqakiswano, neminye. Ibidlalelwa enkundleni yezemidlalo eKandahar eMnambithi.